19 Sales Stats yeemail, Runhare, Voicemail, uye Zvekutengesa Zvemagariro | Martech Zone
19 Sales Stats yeemail, Runhare, Voicemail, uye Zvemagariro Kutengesa
China, November 10, 2016 Chitatu, Nyamavhuvhu 30, 2017 Andrew Gazdecki
Kutengesa ndeye vanhu bhizinesi uko hukama hunokosha zvakanyanya sechigadzirwa, kunyanya muindasitiri yekutengesa software. Varidzi vebhizinesi vanoda mumwe munhu wavanogona kuvimba naye kune kwavo tekinoroji. Ivo vanozoshandisa ichi chokwadi, uye kurwira mutengo uri nani, asi zvinodzika kupfuura izvozvo. Mutengesi wekutengesa uye muridzi weSMB anofanira kuwirirana, uye zvinonyanya kukosha kuti rep rekutengesa kuti izvozvo zviitike. Hazvishamise kuti vanoita sarudzo vasvetuke pamusoro pevatengesi vavasingade, kunyangwe kana zvichireva kubhadhara zvakanyanya.
Iko kune kuseka kwekare mukutungamira kwekuti mutengesi haafanire kuve akangwara - akangwara zvakakwana. Wese munhu chero ari mukutengesa anoda kuziva nzira yekuvhara chibvumirano. Kana ivo vachigona kuzviita izvo, vamwe vese vanozvitarisira vega. Vabatsiri vemuhofisi uye maakaundendi vanogona kutarisira zvimwe zvese. Chinhu chikuru masutu epamusoro pekuchengetedza hanya ndeyekuti imarii yekutengesa inogona kuunza mukati.
Kushanda mukutengesa kunodawo kufunga kwakasiyana. Muvezi anoziva kana chimwe chinhu chikavakwa uye chapera. Basa ravo riri pamberi pavo uye rinobatika. Anoshanda pamutsetse wemusangano achaona izvo zvavakawedzera pawijeti yavakabatsira kuvaka, uye vanozozivawo kuti mangani mayuniti avakapedza pazuva. Wekutengesa-rep haana izvo zvinooneka izvo. Kubudirira kwavo kunoyerwa zvakanyanya semapoinzi mumutambo. Vanoziva kuti vanayo, kunyangwe isiri chinhu chavanogona kubata nekunzwa. Iwo makadhi echikwereti ane madhora zviyero uye makota.
Iyo zvakare haisi static munda. Tekinoroji yakachinja kutengesa zvakanyanya seimwe indasitiri. Zvemagariro midhiya zvakapa nzira dzakawanda dzekuwana vatengi uye zvinhu zvakaita seemail zvinogona kuva zvishandiso zvinobudirira kune avo vanoziva kuishandisa. Iyi infographic kubva Bizness Mapurogiramu inoratidza hunyanzvi hwekukanganisa hunyanzvi hune zvekutengesa, uye nemashandisiro aakaita mutambo.
19 Zvinotyisa Zvitengesi Zvichachinja Mashandisiro Aunoita Iwe
Nezve Bizness Apps
Bizness Mapurogiramu ndiwo WordPress yekugadzira app. Vazhinji vedu vatengi vari chena chitaridzi app vagadziri - ekushambadzira kana ekugadzira masangano ayo anoshandisa chikuva chedu kudhura zvinobudirira kuvaka nharembozha dzevamabhizinesi madiki vatengi
Tags: bizness appsKugonesa Kugonesanhamba dzekutengesanhamba dzekutengesayekutengesa voicemailkutengesa voicemail statskutengesa munharaundanhamba dzekutengesa mafoni
Andrew Gazdecki ndiye muvambi uye CEO we Bizness Mapurogiramu - kugadzira nharembozha dzinodhura uye nyore kumabhizinesi madiki. Tiri kuzviita-pachako-iPhone, iPad, Android & HTML5 Anwendung papuratifomu iyo inobvumidza chero bhizinesi diki panguva imwe chete kugadzira, kugadzirisa, uye kugadzirisa nharembozha maapplication pasina chero chirongwa cheruzivo chinodiwa.
BoomTown Yapedza Sei Iyo Yayo yeMartech Stack NeKufona kweUngwaru
Zvemukati Kureba: Kutarisisa Spans Zvinoenderana Engagement